Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlanganayo zaseTunisia » Oololiwe badibana eTunisia beshiya ama-30 okanye bonzakele ngakumbi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba eziHlanganayo zaseTunisia
Oololiwe ababini bangqubene eTunisia namhlanje, ngoLwesine, Okthobha 7, 2021, kushiyeke abantu abangama-30 benzakele. Abonzakeleyo basiwe kwizibhedlele ezikufutshane.
Ingxabano yenzeke nje ngaphandle kweTunis, inkulu-dolophu yaseTunisia, kwindawo yaseMegrine Riadh yaseBen Arous.
Zininzi ukungqubana koololiwe kwakutsha nje eTunisia okukhokelele ekufeni kunye nokwenzakala.
Okona kubi kakhulu kwakungo-2015 xa kwasweleka abantu abali-19 kwaye kufutshane ne-100 benzakala emva kokuba uloliwe engqubane neloli.
Ingozi yenzeke kwindawo yaseMegrine Riadh yaseBen Arous, ngaphandle nje kwekomkhulu laseTunis. Kubekho oololiwe abaninzi kweli lizwe kule minyaka idlulileyo.
Nge-28 kaDisemba ngo-2016, kwabakho ukungqubana phakathi koololiwe kunye nebhasi eqhutywa yi Urhulumente waseNabeul IQumrhu lezoThutho loMmandla. Ungqubano lwenzeka kwiNdlela kaZwelonke 1 eSidi Fathallah, indawo eseDjebel Jelloud kufutshane nekomkhulu laseTunis. Abantu aba-5 bafa kwaye malunga nabantu abangama-52 benzakala kuloo ngozi. Kwababhubhileyo, kwakukho amajoni amajoni ama-2 axhobileyo aseTunisia, iarhente yokulwa nobunqolobi, kunye nomfazi kunye nosana.
Ukuphahlazeka koololiwe ngo-2015
Emva kophando olwenziwe nguMphathiswa Wezothutho waseTunisia, esona sizathu sichaziweyo sokungqubana kwe2016 yayisisantya esigqithisileyo somqhubi webhasi kunye nokungabikho kwengqwalaselo kwi-alamu yelizwi eyakhutshwa ngololiwe. Ngqo, ukulibaziseka ekulungiseni iziphene zikaloliwe kunye nesithintelo esizenzekelayo kunye nokungabikho kolungelelwaniso nabasemagunyeni ngokubhekisele kwimfuno yeempawu zethutyana kunye nokungabikho kwendoda yokhuseleko kwiphambuka nazo zikhankanyiwe njengezizathu zengozi.
Ingozi ebulalayo yenzeke ngoJuni ka-2015 xa kwasweleka abantu abali-19 kwalimala abangama-98. Ingxabano yenzeke phakathi koololiwe kunye nelori e-El Fahs, Thunishiya. Unobangela ophambili wengozi yayikukungabikho kwesithintelo kwinqanaba lokuwela.
NgoSeptemba 24, 2010, uloliwe waseBir el-Bey wadibana nolunye uloliwe uvela eSfax yaseTunisia eyayibangela ukuba iphazamise kwaye idilike emva kokubethwa ngolunye uloliwe kwinqwelo yomsila kwisikhululo sikaloliwe. Ingozi ibangele ukufa kunye ne-57 eyenzakeleyo. Isizathu sengozi sasingabonakali kakuhle ngenxa yemvula enogonyamelo.
Kusungulwa uphando yiTunisian National Railways Company ukumisela iimeko ezijikeleze ukungqubana kwanamhlanje kunye nokufumana abo banoxanduva.
I-Rheumatoid Arthritis Uvavanyo olutsha lweKlinikhi